ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အတွက် Chakra Linux Descartes ကိုရနိုင်သည် Linux မှ
Linuxera လူများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ဤ post သည်သင်ဒီမှာရှိနေနှင့်ပြီဟုသင့်အားအသိပေးရန်ဖြစ်သည် Chakra Linux Descartes၊ ကျနော်တို့ဒီမှာရှိနေကတည်းကငါအချို့အကြံပေးချက်များထားခဲ့ပါ။
အားလုံးကြော်ငြာ၏ပထမ oficialခင်ဗျားလုပ်တဲ့ဘာသာပြန်ကိုယူမယ် ရဟတ်ယာဉ်၏အရိပ် (ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည့်ဘလော့ဂ်) နှင့်ဘာသာပြန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
1 Chakra Linux ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
3 Live USB ဖန်တီးပါ
4 YAPA: ထပ်ဆောင်းထပ်ဆင့်ချိန်ညှိချက်များ
5 repository ကိုဖွင့်ပါ [အပို]
6 တစ်ခု "အချည်းနှီးသော" session တစ်ခုစတင်ပါ
Chakra Linux ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
«Chakra အဖွဲ့သည် Descartes စီးရီး၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုကို KDE 4.13 ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် တွဲဖက်၍ ဂုဏ်ယူသည်။ ကျနော်တို့အနုပညာအစုံသစ်၏လုပျငနျး၏ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည် အသားစားအမည်ဖြင့် Sirius။ Chakra ၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးသည် GRUB အခင်းအကျင်းမှ KDE desktop အထိကောင်းမွန်စွာညှိထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Chakra သည် server အသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုတိုးတက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရလဒ်အနေနှင့်၎င်းတို့သည်ယခုတွင်ပိုမိုအလုပ်လုပ်လာပြီးထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်ရေးစနစ်များသည်အဆင့်မြှင့်မှုများများစွာရရှိပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ repositories သည်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသော package manager အသစ်ဖြစ်သော Akabei သို့ပြောင်းရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ။
ထို့အပြင် Chakra အဖွဲ့နှင့် arnt (Octopi ကိုဖန်တီးသူ၊ pacman အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာဖုံး) တို့အကြားပူးပေါင်းမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော "fork" Oktopi သည်နောက်ဆုံးပေါ် Octopi ဗားရှင်းနှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြသည်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုအကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည် "အထက်ပိုင်း" တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသောတိုးတက်မှုအားလုံး၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်လိမ့်မည်။
ယခု Chakra ၏မူကွဲအသစ်တွင်အောက်ပါတိုးတက်မှုများနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများပါဝင်သည်။
KDE ဆော့ဗ်ဝဲစုစည်းမှု။ Chakra သည်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သော KDE SC, ၄.၁၃.၁ ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတွင် Nepomuk ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို Baloo ဖြင့်အစားထိုးထားသည်။ Chakra မှာအသုံးပြုသူ Baloo ကို disable လုပ်ဖို့ patch တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အကြံပေးချက်ကအဲဒါကို enable လုပ်ထားဖို့ပါ။ ပုံသေရွေးစရာများနှင့်ပြanyနာရှိပါကသတင်းပို့ပါ။
Chakra ကိရိယာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားများကိုဘာသာစကား ၃၀ သို့အပြည့်အဝဘာသာပြန်ပြီးပါပြီ ကွမ်းခြံကုန်း.
အနုပညာအစုံ။ Chakra လိုဂိုအသစ်နှင့် GRUB, KDM, KSplash, Yakuake နှင့် desktop နောက်ခံအသစ်တို့အတွက် default Sirius themes အသစ်များ။
သတိပြုသင့်သည်မှာ X server ၏မူကွဲအသစ်ကိုအထောက်အပံ့မပေးသောကြောင့် catalyst-legacy package ကို repositories မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းအစားအခမဲ့ driver (xf86-video-ati) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ။
Core packages များ။ Kernel ကို 3.12.15, xorg-server ကို 1.14.5 နှင့် systemd 212 ။
kcm-pacman-repoeditor ("System Preferences" မှ pacman repositories ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီသည်)
kcm-about-distro ("System Preferences" တွင်လည်းတွေ့ရပြီးစနစ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြသည်)
Kup (ထပ်ဆင့်။ ထပ်တူထပ်မံပြုလုပ်ထားသော backups များကိုလုပ်ဆောင်ရန် rsync နှင့် / သို့မဟုတ် bup ကိုအသုံးပြုသောရိုးရှင်းသောစွမ်းအားကောင်းသော backup solution)
ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားသောအပို repository ကို, မရှိမဖြစ် GTK applications များနှင့်၎င်းတို့၏မှီခိုပေးသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန် kcm-pacman-repoeditor ("System Preferences" ရှိ Chakra Repositories Editor) သို့မဟုတ် Octopi ကိုသုံးပါ။ ဤပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုဒီတွင်တွေ့နိုင်သည် ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့် step။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, တိုင်ပင်ပါ repositories စီမံခန့်ခွဲ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများ၌တည်၏။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Tribe installer သည် UEFI, RAID, LVM or UEFI တို့ကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့မပေးသေးပါ GPTကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်များတွင်ဖြေရှင်းချက်အချို့ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော installation မီဒီယာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်၊ လိုက်နာပါ ဝီကီညွှန်ကြားချက်များ။ Chakra iso ပုံရိပ်တွေက unetbootin ကိုမပံ့ပိုးနိုင်ဘူး၊ ဒီဗီဒီတွေကို 4x ထက်မပိုတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ဖန်တီးရမယ်။«
Live USB ဖန်တီးပါ
Linux- ရုပ်ပုံရေးဆရာ (Suse Studio Imagewriter)
Windows ကို: Win32diskimager ပါ
ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါချိန်ညှိချက်များအားလုံးသည်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်
အဆိုပါ repository ကိုသက်ဝင် [အပို]
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ repository မှာအသုံးအများဆုံး GTK applications များပါရှိသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Chakra Linux Descartes repositories editing tool သို့သွားသည်။System Preferences -> Chakra Repositories Editor) နှင့်အပို repository ကို select (ငါ့စခရင်၌ငါစမ်းသပ်ခြင်း repository ကို (ငါ Chakra ၏စမ်းသပ်ခြင်းဌာနခွဲ၌ဖြစ်၏ကတည်းက) နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် x11tete11x repository ကိုပေါ်လာကြောင်းကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်) ကိုရွေးပါ
တစ်ခု "အချည်းနှီးသော" session တစ်ခုစတင်ပါ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင်သည်စက်ကိုပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါဖွင့်သောအခါ၊ သင် log in လုပ်သည့်အခါသန့်ရှင်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာငါစက်ကိုငါပိတ်လိုက်သောအခါငါဖွင့်ထားခဲ့သည့်အရာများကိုမဖွင့်ပါနှင့် System Preferences -> Startup နှင့် Shutdown -> Session Management နှင့်သက်ဆိုင်ရာ option ကိုစစ်ဆေးပါ
Chakra Linux Descartes ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောလွတ်လပ်မှုကိုပေးထားပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်လိုသည်များကိုလုပ်ပါ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင် packages များနှင့်အတူဒေသခံ repository ကိုချိတ်ဆက်လိပ်စာကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သို့တစ်ခုတပ်ဆင်ရမည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
ငါ့မှာလက်ရှိရှိနေတယ် သိုလှောင်ရုံ de PKGBUILDS အတွက် Chakra Linux ကျွန်ုပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် pkgbuilds ကိုတစ်ခါတစ်ရံ upload လုပ်သည့်နေရာ၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများ (ဥပမာ KFaenza set ရှိ toolbar ၏ icon များအတွက် patch) နှင့်အောက်တွင်ဤသိုလှောင်ရာမှ package များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပြလိမ့်မည်။
၁) git ကို install လုပ်ပါ။
2) repository စာမျက်နှာကိုသွားပြီး package တစ်ခုကိုရွေးပါ ကျောက်စိမ်း
၃။ စုစည်းပါ - ဒီကနေငါနည်းလမ်း ၂ ခုကိုပြတော့မယ်။ ပထမတစ်ခုက packet ကို Git နဲ့ရမယ်။ ဒုတိယကတော့ local repository ရှိခြင်းမဟာဗျူဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်။
A) ပထမပုံစံ ("လက်စွဲ")
B) Second Way (Local repository အသုံးပြုခြင်း)
နောက်ဆုံးတော့သုံးစွဲသူများက linuxtracker ကိုဝင်လို့မရဘူးဟုမှတ်ချက်ပေးသောကြောင့် .torrent link ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် dropbox ထဲသို့ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် Chakra Linux Descartes ကိုရနိုင်သည်
87 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အကောင်းဆုံးဖြန့်ချိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်ပြုလွှာများသည် Chakra အဖွဲ့သို့ဆက်သွားသည်
ငါ့ကိစ္စနှင့် KaOS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Chakra သည် KaOS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နောက်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ kernel, mesa, xorg-server, intel ဂရပ်ဖစ်ယာဉ်မောင်းစသည်တို့ကိုကြည့်ပါ။
ဤသည်, သင်တန်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး guston ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, KaOS ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားနေသားတကျ။
ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ငါ Chakra စွန့်ပစ်။
Man, ဒါပေမယ့်မင်းဟာahနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ စိတ်ကူးပဲ၊ Chakra က Half Rolling၊ distro ရဲ့ Core ကိုအရမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ version တွေနဲ့ထားတယ်၊ KDE desktop ကလုံးဝ Rolling ပါ။
အတိအကျပြောရရင် Chakra ရဲ့ဂုဏ်အသရေ ......
၎င်းသည်ကူးယူစာရင်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ x11tete11x အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဒါကငါမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့သည်အရာဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ၁၀၀% Rolling မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းမပြီးဆုံးပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုမှာ chackra သည်ပြtroubleနာများစွာကြုံတွေ့နေရသည်ကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ဖတ်ရသည်ကိုမသိပါ။ အဲ့တာမှန်တယ်?
လူတွေပိုလိုအပ်နေတာကြောင့်သူတို့ဟာအချိန်အကြာကြီးရုန်းကန်နေရတယ်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကအဖွဲ့၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemsနာများကြောင့်ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ထပ်မံ၍ မသွားဘဲ Kaos ကို Chakra မှထွက်ခွာသူတစ် ဦး မှဖန်တီးခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအရမ်းနှစ်သက်တဲ့ distro တစ်ခုဖြစ်ပြီး arch linux အတွက် KDEmod ဖြစ်ချိန်ကတည်းက Chakra မစတင်မီကသိခဲ့တာပါ။
ပေါရာဏ? ကောင်းပြီ, ငါနှစ် ဦး စလုံးကြိုးစားခဲ့ငါက၎င်း၏ "ပေါရာဏ" packets တွေကိုပေမယ့် kaos ထက်အဆတထောင်ပို။ နှင့်အတူ Chakra နှင့်အတူကျန်ရစ်ဖြစ်၏ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ဟောင်းနွမ်းနေသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာအချို့ရှိပါက kaos မှကြုံတွေ့ရသော packet အသစ်များအတွက်နှင့် volume အတွက် arch သို့ကူးပြောင်းလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အထုပ်ကြီးများမရှိခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါ kaos စွန့်ပစ်။
ငါ Chakra နှင့်အတူကောင်းစွာချောင်းဆိုး, ငါကိုချစ်တဲ့ distro င် kaos မတည်မငြိမ်?
ငါတို့ကို့ကိုမကြိုက်ချင်မှမကြိုက်ပေမဲ့ငါက install လုပ်ထားတယ်၊ တည်ငြိမ်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ဘူး။
networkmanager နှင့်ပြproblemsနာများ၊ ဆိုင်းငံ့မှုမှပြန်လာသည့်အခါ networkmanager ကိုယူပြီး dhcpcd @ network ကိုဖွင့်ရန် internet.solution ကိုမဆက်သွယ်ပါ။
ပြတ်တောက်ခြင်းပြတ်တောက်ခြင်းပြ,နာများ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးသည့်အခါဖြေရှင်းချက်မပါဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
အချို့အက်ပ်များ၏ဘာသာစကား၊ masterpdfeditor, cantata နှင့်နောက်ဆုံးဂိမ်း 0ad ၏ alpha နှင့်ပြနာများ၊ ဘာသာစကားပြောင်းလဲရန်သူတို့အတွက်နည်းလမ်းမရှိ၊ qt5 fault? Chakra (သို့) Arch ထဲမှာသူတို့ဟာဘာသာစကားကိုပြproblemsနာမရှိဘဲယူသုံးနိုင်ပါတယ်။
build and kde-next repositories နာမည်မထည့်ဘဲ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်ဟုအကြံပြုသော်လည်း၊ linux-next နှင့် nvidia-next ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောအနက်ရောင် screen ကိုရရှိသည်။
သင် KaOS နှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတမရှိကြောင်း၊ အဘယ်သူမျှတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် kde-next ကိုတည်ငြိမ်မှုများထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်စေရန်မည်သူမျှမတိုက်တွန်းပါ။ အချို့သောသင်အမည်ဖော်ပြသည့်အခြားအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောဗဟုသုတလုံးဝမရှိပါ။
ငါမှာ linux-next အမြဲရှိတယ်၊ ငါမှာ nvidia-next နဲ့ပြzeroနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် icnos မှ KaOS သို့အပြင်အဆင်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိုအပ်သည်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာတတ်သည်။ cantata အရာသည် QT5 (၎င်းသည်စည်းချက်ရှိသည်)၊ မင်းအနီရောင်ထားတယ်
ဆိုင်ကယ်သို့စီးရောင်းပါ၊ kaos သည်အဓိကအားဖြင့်အခြေခံသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ဆိုင်မှုတွင်၊ chakra တွင်အဓိကအကြောင်းအရာ၊ အိုင်ကွန်များနှင့်လှပသောနောက်ခံများရှိသော်လည်း၎င်းတွင်မရှိချေ။ kaos ကိုအသုံးပြုပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက application အနည်းငယ်သာရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်က developer ကို server (၃) ခုထက်ပိုပြီးငှားဖို့အတွက် package တွေဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာတွေအများကြီးထားချင်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
သင့်မှာပြproblemsနာမရှိဘူး၊ သူတို့ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုပိတ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ shutdown ချခြင်းသည် external icon များနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။ ကလေးတွေကိုပုံပြင်တွေဖတ်ပါ။ နှင့် cantata အရာ qt5 ရဲ့အမှား, ဟုတ်သလော application တစ်ခုကဘာသာစကားကိုမပြောင်းဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် kaos မှာမှားသွားရင်အမြဲတမ်း qt5 ရဲ့အမှားပဲ။
ငါ ArchLinux ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ထိုပြproblemsနာများကိုမဆိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ KaOS (virtual machine နဲ့ LiveCD ပေါ်မှာ) ကြိုးစားပြီးပြtriedနာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်လူ၊ စိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့၊ သင့်အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတခြားသူတွေနဲ့အတူတူပဲလို့မဆိုလိုပါဘူး။
@entel KaOS သည် Arch အပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်ပါ။ Arch နှင့်အတူမျှဝေသည်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ pacman ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် packages များတပ်ဆင်ရန်အဆင်အပြင်သည် Debian နှင့်ဆင်တူသည်
LOL ဒါပေမယ့်သင် bug တွေတင်ပြခဲ့တာလဲ ဒီတည်ဆောက်မှုသည်အမှားအယွင်းများရှိပါကစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုသို့မရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာက kaos ငါ ၁၀၀% တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ Kaos နဲ့ Chakra အကြောင်းပြောနေတာကနောက်ကွယ်မှာပါ။
KaOS မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလား။ သင်စမ်းကြည့်ဖူးလားဒါမှမဟုတ်မကြာသေးခင်ကမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက်စကားပြောခဲ့သလား။
ပြီးတော့အထုပ်များမရှိခြင်း၊ ကြည့်ရတာငါ့မှာများများရှိတယ်၊ တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။
KaOS သည်လက်ရှိအချိန်တွင် Arch ထက် ပို၍ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီ distro နှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
နောက်ဆုံး၌အတွင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသောအစက်အပြောက်များနှင့်မနီးစပ်ပါ။ ယခုသင်သည် colacao နှင့်အိပ်နေသောနို့ကိုသောက်သည်။
မင်းချစ်ရတဲ့ kaos ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုသင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှားယွင်းနေလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်၊ ဒါအရမ်းကောင်းရင်၊ မင်းရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးဘလော့ဂ်ကိုဘယ်လိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးသင် ante ကိုသွားခဲ့တာလဲ။
သင်နောက်သို့မလိုက်ဟုထင်ရပုံရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် KaOS ကိုအချိန်မရွေးဖယ်ရှားလိုက်ပြီ၊ ဒရော့စ်အမြောက်အမြားရှိခြင်းအတွက်အခန်းကန့်များအများအပြားထားရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကောင်းပြီ
ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအခန်းကဏ္ multiple မျိုးစုံရှိခြင်းနှင့်မည်သို့ဆိုင်သနည်း။ ၀ န်မခံပါနှင့်၊ သင်သည်အကောင်းဆုံးသောအရောင်းရဆုံးအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့သော manjaro နှင့်အတူသင့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့သင်ယခုတွင်သန္ဓေသားလောင်းများကို kaos ထက် ပို၍ ပစ်ချလိုက်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ဘာသာစကားကို moderate လုပ်မလားကြည့်ရအောင်😉
ဘာသာစကားအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Chakra၊ Manjaro ဒါမှမဟုတ်ဘာမှထွက်မလာတာ၊ Kaos ရဲ့ကြော်ငြာခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှသတင်းဆောင်းပါးများဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောရန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သို့သော်သင်တို့အဘို့မဟုတ်ကြောင်းအချက်ကို, ကြွင်းသောအရာများအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်သည်မဆိုလိုပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစားရမယ်။
မင်းကမင်းကိုတွေ့တာက "kaos ဟာအာကာသကိုအခြေခံတဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းပဲ" ငါဖတ်တာကိုရပ်လိုက်သည်။
စကားမစပ်၊ ဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်သလဲ၊ ငါကောက်ရိုးလုပ်လား၊ ဆိုင်ကယ်တစ်ဆိုင်မှာရောင်းမှာလား။ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိခြင်းသည်မည်မျှစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်သနည်း။
ယခုငါစဉ်းစားသောအခါ, ငါနှစ် ဦး စလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောက်ရိုးဖောက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းတာကကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။
PS: fap fap fap brum brum brumm … ..
သင်၏အငြင်းပွားမှုများသည် kaos သည် Arch နှင့် chakra တို့အပေါ်အခြေခံသည်။ အချို့သည် ubuntu ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည် debian ကိုအခြေခံသည်ဟုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြောကြသည်။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအစကနေစပြီးဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် 64 bits, qt နှင့်ရယ်စရာကောင်းသော package base တို့ဖြင့်သာအလုပ်လုပ်သော arch တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ထိုအခါ fap, fap ပြီးနောက်သင်၏သွားတိုက်။
တစ်ခုမှာ Chakra နှင့် ပတ်သတ်၍ ထင်မြင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ခေတ်မမီတော့ကြောင်းနှင့် Kaos သည် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုပြောရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သတင်းမှာ chakra မဟုတ်သော kaos ဖြစ်သည်။ Kaos ငါ iso အသစ်တစ်ခုရရှိသောအခါသင်ရရှိသောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ kaos အပေါ်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ So.
ဒါမှမဟုတ်ဘတ်ပြောတာကပိုကောင်းတယ်၊ Chakra ကစို့တယ်၊ ငါအကောင်းဆုံးသုံးတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
@entel၊ KaOS သည် Arch အပေါ် အခြေခံ၍ မဟုတ်ပါ၊ Frugalware ကဲ့သို့၎င်း၏ package manager ကိုသာအသုံးပြုသည် http://kaosx.us/faq-es/#KaOS_no_es_otra_distribucin_basada_en_ArchEn_qu_se_diferencia_con_Chakra
ပြီးခဲ့သည့်စာပိုဒ်ကိုဖတ်လျှင်၎င်းသည် Archlinux ထက် Debian နှင့် ပို၍ တူသည်ဟုငါဘာကြောင့်ပြောရကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်
သူတို့ယူတဲ့တန်ချိန်ကကျောက်တုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မှတ်ချက်ပေးဖို့ ဦး ချိုကိုငါ့ကိုအာဏာရှင်လို့မခေါ်ပါနဲ့။ ငါတော်တော်များများကိုဖယ်ရှားပြီးပြီ။ လူထုံလား ပြီးတော့ @entel နှင့်သင်လည်းဆီသို့သွားသည်။
Antergos (arch) သည်ရှပ်တာနှင့်ပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။ Shutter သည်ကျွန်ုပ်အတွက် antergos တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အတွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်တော့တည်ငြိမ်သည်။ နေ့စဉ် antergos ကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။
@entel သည်“ ဖျော်ဖြေမှု” မရှိပါ၊ သူသည်ခေါင်းမာဆဲဖြစ်ပြီး KaOS သည် Arch ကို အခြေခံ၍ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်စီမံကိန်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပင်မသွားနိုင်ပါ။
Ingorance သည်စျေးပေါပြီး @entel သည်အလွန်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
စကားမစပ်၊ KaOS ကိုမစတင်ခဲ့တာငါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတော့အသုံးမ ၀ င်ဘူးလို့ပဲပြောခဲ့တာကအဲဒါဟာကုန်းပတ်ထဲပြန်သွားတာပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, အားလုံးယေဘုယျအဆင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ထိုအခါငါနှင့်အတူကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်စတင်ခဲ့သည်
«အကောင်းဆုံးဖြန့်ချိခြင်း၊ Chakra အဖွဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်ပြုလွှာများရှေ့ဆက်သွားပါမယ်»
သင်မြင်သည့်အတိုင်း @entel သည်ပညာရေးနှင့်အတူသင်နှင့်မတူ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အံသွားနှင့်သွားတိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကငါ့ကိုနဲ့ KaOS ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာကိုမြှင့်တင်လိုက်လို့သင်ဟာပိုပြီးမှန်ကန်မှာမဟုတ်ဘူး။
"မိုက်မဲသူတစ် ဦး ခြံစည်းရိုးမှတွယ်ကပ်နေတဲ့အခါ, သူကဖြုတ်မထားဘူးဆိုရင်သူကအဲဒီမှာထွက်ခွာ"
»ယခုတွင်သင်သည် colacao ဖြင့်နို့ကိုသောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားသည်။ »
အထူးသဖြင့် shutdown နှင့် icon များဖြင့်သင်၏အငြင်းအခုံဖြစ်ခြင်းကိုသင်မသိဘဲပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
စကားမစပ်, သင် kaos ထားသည့်အခြားဖြန့်ဖြူး၏ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းမဟုတ်ပါဘူး။
"အခုတော့နို့ကို colacao နဲ့သောက်ပြီးအိပ်လိုက်ပြီ ... "
ငါထင်တာကမင်းကိုငါပေးတဲ့ဒီ bukkake ဟာ colacao နဲ့နို့တွေထက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ icon တွေအကြောင်း၊ pa "quetenteres" ဆိုတာငါတွေ့ရတာကသင်မှာရှိတဲ့ icon တွေရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး၊ သူတို့ကို Homerun မှာကလစ်လိုက်တဲ့အခါစမတ်စ်ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့တစ်နည်းနည်းလောက်အချိန်ယူရသည်။
စကားမစပ်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမင်းဟာတူညီတဲ့ troll လားဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲလား။ အိမ်မှာသူတို့သိသလား
hahaha, icon တွေကိုအပြစ်တင်တာနဲ့မရောင့်ရဲဘူးဆိုရင် homerun ကိုသင်အပြစ်တင်လိုက်ပြီ။ ကွဲပြားခြားနားသော icon များနှင့် homerun အားလုံးအတွက်ကွဲပြားသောဖြန့်ဝေမှု ၅ ခုတွင် kaos သည်မည်မျှပင်နာကျင်စေကာမူ၎င်းသည်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိပါ။
“ စကားမစပ်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာမင်းဟာတူညီတဲ့ troll လား၊ အိမ်မှာသူတို့သိသလား »ထိုအခါသင်သည်လေးစားခြင်း၊
ဤအရာအားလုံးနှင့်စားပွဲပေါ်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုတင်ခြင်း yoyo သည် Chakra ကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ KaOs သည် Arch ကိုအခြေခံသည်ဟုသင်ထင်နေလျှင်မည်သည့်အရာကဘာလဲ? ဒီဟာကတစ်ခုခုကိုပြောင်းမလား။
ခင်ဗျားတို့ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးမင်းရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုချန်ထားမလားကြည့်ရအောင်။ DL ဟာဘယ်သူ့ကိုမှလက်ဝှေ့သမားမဟုတ်ဘူး၊ ကောက်ရိုးနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကမရှိတော့ဘူး။ မမှတ်တဲ့သူတွေဆီကနေကျွန်တော်မှတ်ချက် ၅ ချက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ သူ Yoyo ကိုသူချစ်တယ် ... သူတို့စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ bullshit ကိုသင်မြင်လား? ကလေးငယ်များကိုယခုဝတ်ပါ။
@entel, KaOs ဟာ Arch ကိုအခြေခံတယ်၊ မင်းပြောတာယုံလို့မင်းရဲ့ပြproblemနာကိုမင်းမမြင်ခဲ့ဘူး၊ မင်းရဲ့ဘဝနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာတပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရန်ဖြစ်မှုတွေနဲ့ဆက်မတူတော့ဘူး။
@Yoyo၊ မင်းရဲ့ distro ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ချစ်တာငါသိတယ်၊ ဒါကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုအခြားဘာပြရမလဲ။ ထွက်ခွာခွင့်ပြုပါ၊ ယခုသွားပါပြီ ... ကျွန်ုပ်နှင့် @Elav ကိုသာမန်ထက်ထူးကဲသောရန်ပွဲများမလုပ်ပါနှင့်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သူတို့တစ်တွေချစ်ခြင်းမေတ္တာ <3 ဖြစ်ကြသည်
ငါတောင်းပန်ပါတယ် nano နှင့်အခြားဝေဖန်သုံးသပ်သူများ, ငါ့စိတျအပိုငျးငါမှတ်ချက်များကိုအနီးကပ်, ကောင်းစွာမဟုတ်ပါ, ငါကျန်ကြွင်းတစ် ဦး ...... .. ငါ Chakra ၏ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူနှစ်ရက်နှင့်ယခုမှစ။ အတော်လေးကောင်းသောအားဖြင့်လာမယ့်နောက်ခံပုံမှလွဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါဟာအရုပ်ဆိုးလားသို့မဟုတ်ငါ့ကိုပဲအဲဒီလိုထင်ရသလား?
ငါနံရံကိုသဘောကျတယ်၊ ဒါမရုပ်ဆိုးဘူး၊ ဒါ့အပြင်အရသာမရှိတဲ့ xD
ကျွန်တော်အကြိမ်တစ်ဝက် Rolling distro ကို ၁၀၀% Rolling တစ်ခုထက်ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတကယ့်အကျိုးအမြတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး၊
ငါ၏အစွန့်ပစ် Chakra နှင့်အတူတီကောင်အဖြစ် ^ __ ^ ။
ငါ Chakra ကို ၂ နှစ်လောက်သုံးခဲ့ပြီးပြီ။ ငါအနုပညာလက်ရာအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့လူတိုင်းရဲ့ခေါင်းကိုရောက်နေပြီလို့ငါထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Dharma ကို grub, kdm နှင့် ksplash အတွက်သိမ်းထားမည်။ Plasma အတွက်ငါလေနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ linux မှ chromiun သည်သံနှင့်တူညီသလော။ (ဆိုလိုသည်မှာ source code ကိုအခြေခံထားသော်လည်းသူလျှိုကုဒ်အားဖယ်ရှားခြင်း)
2. ဘယ်လိုငါ Arch အပေါ်သံကို install လုပ်သလဲ? ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးပါပြီဒါပေမယ့် run လို့မရပါဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chromium ကိုအဲဒီဘရောက်ဇာနှင့်၎င်း၏ Google Chrome ဖြစ်သောစီးပွားဖြစ်ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂူးဂဲလ်ဌာနမှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ Iron နှင့် Chromium သည်၎င်းကို Google ကအထောက်အပံ့မပေးသောကြောင့် Google ၏ထပ်တူပြုခြင်းစနစ်နှင့်လည်းမသက်ဆိုင်ပါ။
သံကသူတို့သည် chrome FROM မှသူလျှိုကုဒ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားသည်
အဘယ်ကြောင့် linux ပေါ်ရှိ chromiun သည်သံနှင့်အတူတူမပြုလုပ်ပါသနည်း။
အဓိကအားဖြင့် Chromium ကို google ကထိန်းသိမ်းထားပြီး developer များရဲ့ကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Chakra's Chromium တွင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Chrome ၏ PDF Viewer နှင့် Flash plugin ကိုတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်သင် Chrome တွင်လုံခြုံရေးပြwithoutနာများမရှိဘဲအထူးပြုလုပ်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးနီးပါးရှိသည်။
ကောင်းတယ် ထို့အပြင် KDE ကိုသုံးသောသူများအတွက် interface သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနုပညာလက်ရာများမပါတဲ့ GNU / Linux distro ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ interface ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်တယ် (ခဏခဏ။ ဒါပေမယ့် Chakra ရဲ့လက်ရှိ KDE interface ကိုငါမကြိုက်ဘူး) ။
ငါဒီစမ်းသပ်မှုကိုစမ်းသပ်လိုတဲ့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် chakraos.org ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသမျှသည်အချည်းနှီးပါပဲ။
အကယ်၍ ဒီဖြန့်ဖြူးမှုကသင့်ရဲ့ site ကိုအလုပ်လုပ်နေရင်ငါ့ကိုအကြီးအကျယ်သံသယဖြစ်စေတယ်။
distro သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ server များ၏ပြtheနာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးယောက်ျားလေးများသည်ဘောလုံးနှင့်အတူခြေမချကြ။ ယခုအဓိက Chakra devs များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သူသည်လက်ရှိ hosting ကိုဒေါသထွက်သည်၊ https://groups.google.com/forum/#!topic/chakra-devel/sfwduw1Hf2U
Hosting ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံမှုအားလုံး ၁ လအတွက်အခြေအနေသည်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ သင် CCR နှင့်ဆာဗာထဲရှိတစ်ခုခုကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ မနေ့ကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ပြနာက Hosting ဖြစ်သည်။ ChakraOS VPS သည်နေ့စဉ် DoS နှင့်ရေလွှမ်းမိုးတိုက်ခိုက်မှုများကိုခံယူသည်၊ ၎င်းတို့သည် Chakra site အတွက်ပင်မဟုတ်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်ပြlessနာနည်းသောအခြား hosting သို့မဟုတ် datacenter သို့ပြောင်းရန်ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်သည်။
ငါ arch linux ကဲ့သို့သောအလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် KDE ကိုသုံးသော်လည်း၎င်းသည် arch ၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်လှပမှုကိုပျက်စီးစေသည်ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အမှု၌အရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည် Kubuntu နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်နှေးသည်၊ သို့သော်ပျက်စီးသည်။
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ သို့သော်သင်ဘာလုပ်သည်ကိုသင်သိပါကမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်အဆင်ပြေပါသည်။ Kubuntu 12.10 32 bits: http://i.imgur.com/txXXEe2.png
အကယ်၍ Kubuntu နဲ့ပြhaveနာကနှေးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သင်ကသိုးကိုကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုရင်၊ 4gb အမြောက်အများရှိတယ်။ ပရိုဂရမ်တွေဖွင့်ဖို့အချိန်မရှိဘူး၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ animations တွေမဟုတ်ရင် (radeon 5770) opengl 1.3 / 2/3 ကိုပြောင်းလဲဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ native / rasterized, အကောင်းဆုံး rasterized opengl2ဖြစ်ပါသည်, သူတို့သည်ငါ့ကို kubuntu တစ်နည်းနည်းမြည်းစမ်းစေသောသေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်ကြ၏,
အားလုံးပြောင်နေသည့် animations များ၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းပင်“ flagship” KDE distro ကိုသူတို့ဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့သော LTS နှစ်ခု (၁၀.၀၄ နှင့် ၁၄.၀၄) ကိုအလိုရှိသည်။ ငါ Kubuntu curdle ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည့်နေရာမှာသင် window ကိုဘယ်ဘက်သို့ဆွဲချလိုက်လျှင်ညာဘက်အပေါ်သို့ (လျှင်မြန်လျှင်) ၎င်းသည်ညာဘက် / full screen / left နှင့်လိုက်ဖက်စေရန်ဖြစ်သည်။ Chakra မှာဒါမျိုးဟုတ်မဟုတ်ငါမသိပေမယ့် distro ကအရမ်းလေးတယ်
အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် fps ကောင်တာသည်အလွန်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသတိပြုပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu နှင့်ပြhaveနာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်နှေးသော်လည်း၊ သင်သိုးကိုမမြင်ရပါ။ 4gb ရှိသည်။ ပရိုဂရမ်များဖွင့်ရန်အချိန်မဟုတ်ပါ၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိသော animations များ (radeon 5770) opengl 1.3 / 2/3 ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ native / rasterized, အကောင်းဆုံး rasterized opengl2ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည်ငါ့ကို kubuntu ကဲ့သို့မဖြစ်စေသောအရာများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကူးယူပြီးပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသောကြောင့်၊ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူအပြီးသတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
ယခုတွင်ငါသည် Manjaro နှင့်တူသောအရာများအတွက် W & /% $ # နှင့်အတူ partition ကိုရှိသည်။
အားလုံးအရမ်းကောင်းပေမယ့် 32-bit အတွက် kaos ရော chakra အတွက်ဗားရှင်းတွေမရှိပါဘူး။
ယခု kde နှင့် openbox နှစ်ခုလုံးတွင် manjaro ကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားသည်။
၁၀၄ နှစ်ကြာ 10 bit ရှိခဲ့သည်, သင်၏ processor သည် 64 bits ကိုထောက်ပံ့ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။
lscpu | grep "CPU op-mode (s)"
မင်းရဲ့ပရိုဆက်ဆာက 64 bits ရှိမရှိသိချင်ရင် .. မော်ဒယ်တင်လို့ရလား
ငါက 32 bit ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ စာကြည့်တိုက်များထပ်ပွားစရာမလို၊ သင် Chakra multilib ရှိပါသလား။ ထို့အပြင် application များသည် ram သုံးစွဲမှုလျော့နည်းပြီး 64 bit တွင်လည်း 3.9gb ကိုမှတ်သားသည်။ pae 4.0gb နှင့်လည်းလျှင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုသိပ်မရှိသလောက်အနည်းဆုံးနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်မဟုတ်။ http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ubuntu_1404_x64&num=1
Felipe၊ အကယ်၍ Chakra သည် multilib ဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်နားမလည်ပါ။ 32 bit (သင်အမြတ်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုပါသည်) ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော် 64-bit ထားသည့်လင့်ခ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည် xD အနေဖြင့် 32-bit သည်ကုန်ကြမ်း ၃၂ ခုကိုစားသည်။ မျှော်လင့်ထားသည်။ ((သင်မည်မျှစမ်းသပ်မှုပြုခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများနှင့်ခြားနားချက်ကိုသင်ပြောပြနိုင်မည်ဟုသင့်ကိုကျွန်ုပ်အာမခံနိုင်သည်)
ဒီဟာကဘာလဲ၊ အဲဒါကဘာကိုအသိအမှတ်ပြုသလဲ။ 64 bits စကားလုံးအရှည်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ 64 bits သည် 16 exbytes ၏သီအိုရီဘောင်အထိကိုအသိအမှတ်ပြုသည် (ကျွန်ုပ်မမှားလျှင်) ...
သိသာထင်ရှား။ ၎င်းသည် ram ကိုပိုမိုသုံးစွဲသည်။ ၎င်းသည်စကားလုံးများ၏အကျယ်နှစ်ဆကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် 32-bit OS သည်သံသရာအတွင်းလည်ပတ်ပုံကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်လုပ်ဆောင်စေသည်။
ဒါပေမယ့် 64 sweeps သော application များယေဘုယျအခြေခံစံနှုန်းများသို့မဟုတ်မည်သူမျှမသုံးသည့် application များဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဂိမ်းထဲမှာတူညီသည်။
12.04.4 တွင် (အနည်းဆုံး Ubuntu ၌) ဆုတ်ယုတ်မှုရှိနေသေးသော်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိသော postmark သည် ၁၄.၀၄ ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
@felipe နောက်ထပ်စမ်းသပ်စရာမလိုပဲ "ဘယ်သူမှမသုံးဘူး" လို့အခိုင်အမာပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့သင်ဂိမ်းတွေအကြောင်းပြောခဲ့တာကမမှန်ပါဘူး။ ၀ င်းဒိုး x2 နှင့် nion nion 8200M, nion vidia 7M နှင့်အတူပြတင်းပေါက်များ၌ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့သည်။ win327သည် Dragon Age ကိုတိုက်ရိုက်ကစားသောအခါတိုက်ရိုက်ဂိမ်းကိုစတင်သောအခါ၊ win 647bits ဖြင့် ၇-၁၂ FPS ဖြင့်ကစားနိုင်သည်။ (၎င်းသည်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဖြစ်ပျက်မှုမှသည်အေးခဲနေသောအဖြစ်သို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအံ့သြမိသည်။ "ဒါကမင်းက 12-bit နဲ့ 32-bit ကိုသုံးနေလားဆိုတာအများကြီးပြောနေတယ်။ နဂါးအသက်က 64-bit ဂိမ်းပါ။ 32-bit တောင်မှ 64-bit ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ" ကိုယ်ပိုင်လယ်ကွင်း .. ), 32-bit သူတို့သမိုင်းတွင်ပြီးသားဖြစ်ကြသည်, 32 နှစ် 10 bits ကိုပစ္စုပ္ပန်ပါပြီ။
@felipe ငါသိပြီ .. ဒေတာဘတ်စ်ကားတွင် ပို၍ bit ရှိသည် .. ငါသိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်တစ်ခုတည်းမှာအနိုင်ရ764-bit နှင့် win7 32-bit အတွက်မဟုတ်လျှင်ဂိမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ 64 bit သည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုပေးသည်။
ဤအချိန်ငါ yoyo နှင့်အတူသဘောမတူ, ထက်ပိုမိုခေတ်မီ Arch ထက်? ကျေးဇူးပြု၍ firefox မတိုင်မီရောက်ရှိခဲ့သည်။ anka ကိုထုပ်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်မတိုင်မီရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်ဂန္ထဝင်ကိုသင်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်အချို့သောပရိုဂရမ်များ၏ Kaos ရှိမီးဖိုထဲမှထွက်လာသည့်အခါတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Kaos ကနေရှေ့ဆက်တည်းဖြတ်မူ။ ဘာအစီအစဉ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ Chakra ကိုခေါ်ဖို့၊ ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့ packets တွေကိုတောင်ခေါ်ဖို့ကငါအတွက်ညစ်ညမ်းတဲ့အရာ၊ နှင့် kaos package များအတွက် builds များသည်ကာဗွန်ကူးယူထားသောကော်ပီတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါ Aur တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်၏ update ocenaudio pkgbuild ကိုအဆိုပြုသောအခါ၎င်းသည်သင်လျင်မြန်စွာအကြံပြုခဲ့သော kaos တည်ဆောက်ပုံနှင့်တူသည်။
ဒါကြောင့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အချို့သောသော့ချက်ပရိုဂရမ်များတွင်အစောပိုင်းကရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားသူများမဟုတ်ပါ။ ရေနွေးငွေ့လို။
ငါမင်းကို Kaos ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာလေးစားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတခြား distros တွေကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေတဲ့အထက်တန်းလွှာထင်မြင်ချက်တစ်ခုလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ငါပြောတာကဒီအကြောင်းပြချက်ကိုမင်းကိုဒီအတိုင်းပဲငါပေးသလို ... ငါမင်းကိုငါမပေးခဲ့ဘူး။
ထို့နောက် Arch အတွက်တနင်္လာနေ့:
Qt5 ကဲ့သို့သောအဓိကအရာတစ်ခုခုကော။ SubOS ပုံစံများမှတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် KaOS တွင်အသုံးပြုသောရိုးရှင်းသန့်ရှင်းသော PKGBUILD
KaOS ကိုသဘောမတူစရာကိစ္စမရှိပါ၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောစော်ကားမှုများကိုမတင်ခင်အချက်အလက်များကိုရယူပါ။
ကောင်းတယ် ငါ acer မှာ Openbox နဲ့ intel atom ပါတဲ့ manjaro ရှိတယ်၊ ငါဒီမှာအသစ်ပါ။
ငါ့လက်တော့ပ်ပေါ်မှာအဆင်ပြေမလား။ Salu2 ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Chakra အတွက်ကောင်းသော, ယခုများအတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်မုန်တိုင်းလွန်သွားပြီ
ငါ Manjaro အကြိမ် ၁၀၀၀၀၀ ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ Chackra ကအမြဲတမ်းချိုးဖျက်တတ်သည်။
... မင်္ဂလာပါငါမင်္ဂလာပါပြောလာ။ ငါ archer အချို့မပါဘဲမဟုတ်, chakareros နှင့် kaosinos အကြားမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် versionitisitis ၏တိုက်ခိုက်မှုမှာအများကြီးရယ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ Debian sid ကိုသုံးလျှင် Zen ၏လမ်းကြောင်းသည်အရာအားလုံးကိုရယ်လိမ့်မည်။
Mikhael Santos ဖာနန်ဒို ဟုသူကပြောသည်
အမ် ... ကောင်းပြီ ... XD ။ ပထမ ဦး ဆုံးအရာများ - ကျွန်ုပ်သည်အရာများနှင့်လုံးဝအကျွမ်းတဝင်မရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ Chakra ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင်တပ်ဆင်ရန် Kubuntu ကိုဖယ်ထုတ်ချင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - Chakra တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ကို Chakra နှင့်အစားထိုးရန်ငါရွေးစရာရှိသလား။
(ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကန့်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Windows ကို Kubuntu နှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်)
Mikhael Santos Fernándezအားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခန်းကန့်များရွေးချယ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်သင် Kubuntu ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အခန်းကန့်ကိုရွေးချယ်ပြီး format ရွေးစရာကိုစစ်ဆေးပါ။ partition မှားမလုပ်မိစေရန်သတိထားပါ၊
ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါ Chakra နဲ့ ArchLinux (ငါ့ hard drive haha ​​ကိုမေး) ကြားကဗားရှင်းမှာရှိနေတဲ့ KDE အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ distro တစ်ခုပါ။
GNU / Linux ဖြင့်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည့်စာလုံးပေါင်း - ကောင်းမွန်စွာရေးနိုင်ရန်အတွက်ကိရိယာများ
Debian 2.4.0 တွင် Redmine7ကို install လုပ်ခြင်း